RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Toddobaadkan Champions League & Jamaahiirta Barcelona Oo Aan Rumaysan Karin - Gool24.Net
RASMI: UEFA Oo Ku Dhawaaqay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Toddobaadkan Champions League & Jamaahiirta Barcelona Oo Aan Rumaysan Karin
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay shaxda kooxdii ugu fiicnayd tartanka Champions League kulamadii ka tirsanaa wareega 16-ka ee xalay iyo habeen hore lasoo ciyaaray.
Kooxaha Real Madrid iyo Juventus ayaa habeen hore wada macasalaameeyay koobka iyagoo ku hadhay gacmaha Manchester City iyo Lyon sida ay u kala horreeyaan.
Markale xalay Chelsea iyo Napoli ayaa iyaguna ka hadhay tartanka kaddib guuldarrooyin ay kala kulmeen Bayern Munich iyo Barcelona iyadoo wareega siddeed dhammaadka ay kulmi doonaan Bayern iyo Barcelona.
Shaxdan laga sameeyay afartii kulan ee xalay iyo habeen hore ayuu goolka ugu soo baxay kabtanka Bayern Munich ee Manuel Neuer halka saddex daafac oo ay leedahay ay kala noqdeen xiddigaha Barcelona ee Clement Lenglet oo xalay Napoli gool ka dhaliyay iyo Nelson Semedo iyo waliba Odriozola oo Bayern ah.
Afarta khad dhexe ee ay shaxdani yeelatay ayaa kala ah Raheem Sterling oo gool kasoo dhaliyay Real Madrid, Rakitic oo caawiye ka ahaa goolkii Lenglet ee xalay iyo waliba Perisic iyo Toliso oo iyaguna Chelsea shabaqa kasoo taabtay.
Qaabka shaxdan oo 3-4-3 ah ayay saddexleydiisa weerar kala yihiin xiddigii caawinta iyo goolka kusoo kala dhantaalay Real ee Gabriel Jesus, Cristiano Ronaldo oo laba gool kasoo dhaliyay Lyon iyo waliba Robert Lewandowski oo dhammaan afartii gool ee Bayern ku lug lahaa isla markaana laba gool iyo laba caawimo isku soo darsaday.
Shaxdan ayaysan rumaysan karin jamaahiirta Barcelona kaddib markii gabi ahaanba laga dhex waayay kabtanka Barca ee Lionel Messi oo gool kasoo dhaliyay xalay Napoli sidoo kalena lagu galay rigoorihii uu Luis Suarez tuurtay.
Muniir sherkeewi says:
Messi iyo waxan sheegasaan Ma jesus oo gool dhaliyay goolna caawiyay ayay leehiyiin Messi ha ka horeeyo kkkkkk Jamaahiirtan aad sheegasiin ha yeelaan ama ha diidaan ee cadaalad darada naga daaya